Kana yako GeForce Experience app isiri kutsvaga yako mitambo, iyo nyaya inogona kukonzerwa neisina kunaka faira nzira, isina madhaivhidhi achangoburwa, kana kushandisa yechinyakare software vhezheni.
Kutarisa kana mitambo yako ichienderana, kugadzirisa madhiraivha ako, uye kudzoreredza app iyi ndiyo mimwe mhinduro dzinogona kuitika kunyaya iyi.
Kuti uwane mamwe magadziriso ekuti uve nechokwadi chekuti ruzivo rwako rwemitambo rwakanyanya, unogona kushanyira edu akazvitsaurira Mutambo Hub.
Usakanganwe kuimaka yedu Windows Gadzirisa chikamu kuve nekugara uchingowana akasiyana siyana ekugadzirisa ePC yako
GeForce Experience software inoshamisa zvine simba inoshanda zvikuru neiyo GeForce GTX graphic kadhi akateedzana. Kuisa iyi purogiramu kuPC yako kuchave nechokwadi chekuti haufanire kunetseka nekugadzirisa madhiraivha ako, uye pamusoro peizvi, zvinobva zvanyatsogadzirisa maratidziro emifananidzo yako yemitambo yeakanakisa emitambo yekutamba.
Izvo zviri kutaurwa, vamwe vashandisi vakasangana nenyaya neiyo GeForce Zvakaitika software kusawana yavo yemuno mitambo, uye zvakare kusawana Steam mitambo.
Sezvo izvi zvichizotadzisa kugona kwako kushandisa izere simba reGTX yako kadhi yemifananidzo, kutsamwa kunonzwisisika. Hezvino zvakataurwa nemumwe mushandisi nezvenyaya iyi pane iyo Steam maforamu:
GeForce Chiitiko haigone kuona chero mitambo yandinayo (yakawandisa kutumidza) pandinoyedza kuiongorora neimwe nzira. Ini munguva pfupi yapfuura ndakavaka komputa neGTX 1070, inogona kunge iri dambudziko, sezvo yaishanda mushe mushe pamberi pe laptop yangu. Ini ndinongova nedhiraivha rimwe chete, saka chero mhinduro / matambudziko andakawana aine akawanda akaomarara madhiraivhu haandikanganise. Iyi ingori bhagi neGPU yangu, kana ndiri kurasikirwa nechimwe chinhu?
Kunyangwe pasina gadziriso yepamutemo yenyaya iyi yaburitswa, muchinyorwa chino takanyora dzimwe dzenzira dzakaratidza kuti dzinobatsira mune mamwe mamiriro emushandisi. Verenga pamwe kuti uwane ruzivo.
Chii chandingaite kana GeForce Zvakaitika isiri kutsvaga mitambo?
1. Ita shuwa kuti mutambo wako unotsigirwa
Mimwe mitambo haitsigirwe neGeForce Zvakaitika, uye, nekumisikidza, haizozivikanwe kana kugona kugadziridzwa neapp iyi.
Kuti utarise kana mitambo yako ichigona kushanda, tarisa mukuru Chiitiko cheGeForce chakatsigirwa mitambo.
Kana mitambo yako ikatsigirwa, edza nzira inotevera.
2. Ongorora kuti dhairekitori rekuisa remutambo rakaongororwa
Vhura iyo GeForce Experience App.
Enda kune Zvaunogona Kuchinja.
Ona kuti ndeapi maforodha akaiswa kuti aongororwe neGeForce Zvakaitika, uye kwawakaisirwa mitambo yako
Kana paine mutsauko pakati pesarudzo mbiri, wedzera chinongedzo kune iyo folda yawakaisa iyo mitambo (ex. D: Mitambo).
Mushure mekupedza iri basa, tangazve yako GeForce Chiitiko app uye tarisa kuti uone kana nyaya yacho yagadziriswa.
3. Ita shuwa kuti mitambo yako yese iri pane imwechete hard drive
Kana uine akawanda zvinotyaira zvakaoma yakaiswa paPC yako, iro ruzivo rweGeForce richava nenyaya dzekunyora ruzivo uye nekukupa iwe optimization kwavari.
Kana zvirizvo, zvinokurudzirwa kuti usarudze imwe yemadhiraivha, uye isa mitambo yese kunzvimbo iyoyo.
Yako yechipiri hard drive haina kuwanikwa mu Windows 10? Tevedzera gwaro iri
4. Kana GeForce Zvakaitika isiri kuona mitambo, gadziridza ako madhiraivha eGPU
Tanga iyo GeForce Experience kushandiswa.
Sarudza iyo vatyairi tab kubva kumusoro menyu.
Click Chengetedza zvinyorwa.
Kana paine chero iripo inovandudzwa, sarudzo yekuimisa ichaonekwa muhwindo.
Isa madhiraivha, uye tarisa kuti uone kana nyaya yacho yagadziriswa. Kana iwe usingakwanise kuwana chero madhiraivha matsva, edza inotevera nzira.
Kana iwe uine nyaya kana uchigadzirisa ako eNvidia madhiraivha pa Windows 10, buda iri gwara rakazara.
5.Shandisa yazvino GeForce Experience application
Bvisa iyo app:
Chindai Win + X makiyi uye sarudza yekutanga sarudzo kubva kumusoro Zvirongwa uye maficha.
Tsvaga iyo GeForce Experience app mune iyo rondedzero uye sarudza iyo.
Chindai Uninstall app bhatani uye pedzisa maitiro.
Kuisazve iyo app:
Dharirai shanduro yezvino Chiitiko cheGeForce.
Mhanya iyo inosimudza pane yako PC, uye wozopinda muakaunti yako.
Tarisa uone kana iyo app iri kutsvaga yako mitambo.
Sezvo isu tinonzwisisa kuti zvinogona kuodza moyo sei kuda kutamba yazvino vhezheni yemutambo wako waunofarira, rondedzero iri pamusoro inofanira kukubatsira kugadzirisa iyi nyaya.
Usazeze kutizivisa kana iwe wakabudirira mukugadzirisa iyo GeForce Zvakaitika usingawani mitambo nyaya, uye kana zvirizvo, uchishandisa nzira ipi.
Kana iwe uchida kugovana iyi ruzivo nesu kana kutibvunza chero mumwe mubvunzo, siya mhinduro muchikamu chinowanikwa pazasi peichi chinyorwa.
MIBVUNZO: Dzidza zvakawanda nezveGeForce Zvakaitika
Nei yangu Nvidia control panel yakanyangarika?
Your Nvidia control pani inogona kunyangarika kana software yako kana madhiraivha asiri echimanje. Kugadzirisa, zvakapusa chengetedza yazvino vhezheni yesoftware, uye shandisa Device Device kutsvaga otomatiki vatyairi.
Icho GeForce Chiitiko chakafanana neNvidia control panel?
Kunyangwe hazvo iwo ari maviri anoshandiswa pakutamba mitambo, iyo GeForce Experience app iri nyowani uye inowedzera mushandisi-inoshamwaridzika sarudzo, nepo iyo Nvidia Kudzora PanelDhizaini iri parutivi rwekare. Iyo yekupedzisira inokurudzirwa kune vanhu vanofarira echinyakare kutaridzika.
Ini ndinogona kubvisa Nvidia Control Panel?
Mhinduro pfupi kumubvunzo uyu ine mutsindo Ehe. Kana iwe usiri kufarira kugadzirisa yako PC mitambo zvakare, unogona kungobvisa iyo Nvidia Control Panel kubva Windows pasina kukanganisa kugona kwako kwemitambo.
Best Nvidia mifananidzo yemakadhi 2020: kuwana yakanakira GPU kwauri